Dadaal loogu jiro shirka Jowhar - BBC News Somali
Dadaal loogu jiro shirka Jowhar
23 Maarso 2016
Ra'isul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke, iyo xubno ka tirsan xukuumadda federaalka ayaa kulamo kula leh odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne kaas oo looga arinsanayo sidii loo ambaqaadi lahaa maamul u samaynta Shabellaha dhexe iyo Hiiraan.
Shirka maamul u samaynta labadaasi gobol ayaa waxa horey looga furay magaalada Jowhar, inkastoo markii danbe uu u istaagay khilaafaad hareeyay habka awood qaybsiga ee odayaasha beelaha u matalaya xulida ergada shirka.
Weriyaha BBC Ibraahim Maxamad Aadan ayaa wararkii ugu danbeeyay ee kulamadaasi Muqdisho ka soo diray.
Maqal Dib u habeyn lagu sameeyay saraakiisha milateriga Soomaaliya
Dib u habeyn lagu sameeyay saraakiisha milateriga Soomaaliya
Maqal Maxaa la gudboon xildhibanaada dowladda federaalka ee ku kala qeybsan mooshinkan guddomiyaha barlamaanka?
Maxaa la gudboon xildhibanaada dowladda federaalka ee ku kala qeybsan mooshinkan guddomiyaha barlamaanka?